Wheelchair Brake Extensions - Zano reBrake - Karman Healthcare
×	 US-1816-LT770	1 × $58.00
View ngoro "US-1816-LT770" yakawedzerwa kungoro yako.
Wiricheya Brake Extensions yakakwana kune vashandisi vemawiricheya vanozviwana vachinyanyisa kumabhureki avo ewiricheya nguva dzose. Rudzi urwu runopa kuwedzera kwakawanda uye bhureki rakanaka remawiricheya rinofanira kushanda nesimba asi rinopa STOP yakasimba mukukiya mumavhiri ekuchengetedza.
Karman ane akati wandei marudzi uye zvizvarwa zvemagadzirirwo eiyi yakasarudzika dhizaini. Zvekutsiva zvikamu, SN gore modhi uye kugadzira zvese zvakakosha kuti uone kuti iwe unowana chaicho chinotsiva.
hwiricheya mabhureki ekuwedzera anoshandiswa kupa mushandisi nzira inotambanudzira kunze kuti vashandise vakagara. Izvi zvinobvumira mushandisi kushandisa mabhureki anogona kutadza kusvika kune brake lever neimwe nzira. Iyo yekuwedzera mabhureki tip iri nyore kwazvo kuti vanhu vade kubatwa zvirinani pavanenge vachipwanya pachigaro chavo.